Thepha / isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu
Ibanga lokudla i-LDPE cubitainer
Isikhwama esingu-20 litre chekerer ebhokisini
Isikhwama se-Cheertainer ebhokisini siyisitsha esisha esihlanganisa ukuguquguquka kwesikhwama esiseBhokisini kanye nezinzuzo ezithuthukisiwe zeziqukathi eziqinile noma eziqinile, okwenza kube yindlela ephelele kuzo zonke lezi zinketho. Iqukethe isikhwama sepulasitiki esimise okwe-cube, esinemigqa eminingi, umpompi, ikepisi noma i-valve nebhokisi lekhadibhodi.
Isikhwama sethu sokuzijabulisa esebhokisini senziwe ngepulasitiki enama-multilayer. Isendlalelo sangaphandle (i-polyamide + polyethylene) sivikela umoya-mpilo nomswakama; ukuminyana kwayo nokwakheka kwayo kungahluka kuye ngezidingo zeklayenti noma umkhiqizo. Isendlalelo sangaphakathi (i-polyethylene) sinwebeka futhi siyamelana nokudabuka.
Isiqukathi Samanzi Esigoqekayo Samahhala (ngeSpigot)
UKUDLA OKUPHAKATHI KWOKUDLA KWEBANDLA:
l Ipulasitiki ye-LDPE eyenziwe ngekhwalithi ephezulu yaseJapane impahla eluhlaza.
l Imvelo engenabungozi engeyona imvelo
l Ayikho i-BPA PVC noma i-DEHP
l Alikho iphunga lepulasitiki le-PVC
l Ukunambitheka kwamanzi ngeke kuthinteke
Izinketho ezahlukahlukene zeKhono: 5L 10L 20L.
AmaCubitainers enziwe nge-polyethylene esezingeni eliphansi futhi njengephakeji elihlanganisiwe, eza nebhokisi, isitsha, ikepisi elimhlophe le-polypropylene.
Iziqukathi namabhokisi kuthengiswa ngokwehlukana, ifektri yethu ithengisa ama-cubitainers e-Alibaba online iminyaka engaphezu kwengu-10.
Ama-cubitainers ethu ahlangabezana nezimfuneko ze-FDA nazo zonke izinto zokusetshenziswa ezenza kube yindlela enhle yokugcina amanzi namanye amathuba amaningi.
Isikhwama se-gel esingu-5 litre se-ultrasound
Isikhwama se-gel esingu-5 litre ultrasound siyisitsha esisha esihlanganisa ukuguquguquka kwesikhwama esiseBhokisini kanye nezinzuzo ezithuthukisiwe zeziqukathi eziqinile noma eziqinile, okwenza kube yindlela efanelekile kuzo zonke lezi zinketho. Iqukethe isikhwama sepulasitiki esimise okwe-cube, esinemigqa eminingi, umpompi, ikepisi noma i-valve nebhokisi lekhadibhodi.
Isikhwama se-gel esingu-5 litre se-ultrasound senziwe ngepulasitiki enama-multilayer. Isendlalelo sangaphandle (i-polyamide + polyethylene) sivikela umoya-mpilo nomswakama; ukuminyana kwayo nokwakheka kwayo kungahluka kuye ngezidingo zeklayenti noma umkhiqizo. Isendlalelo sangaphakathi (i-polyethylene) sinwebeka futhi siyamelana nokudabuka.
Isikhwama sokupakisha se-Adblue ebhokisini siyisitsha esisha esihlanganisa ukuguquguquka kwesikhwama esiseBhokisini kanye nezinzuzo ezithuthukisiwe zeziqukathi eziqinile noma eziqinile, okwenza kube yindlela ephelele kuzo zonke lezi zinketho. Iqukethe isikhwama sepulasitiki esimise okwe-cube, esinemigqa eminingi, umpompi, ikepisi noma i-valve nebhokisi lekhadibhodi.
Ukupakisha kwe-Adblue kwenziwa ngepulasitiki ye-multilayer. Isendlalelo sangaphandle (i-polyamide + polyethylene) sivikela umoya-mpilo nomswakama; ukuminyana kwayo nokwakheka kwayo kungahluka kuye ngezidingo zeklayenti noma umkhiqizo. Isendlalelo sangaphakathi (i-polyethylene) sinwebeka futhi siyamelana nokudabuka.
I-Adblue Jerry Can Containers enombhobho
Ekuhlanzweni kwegesi yomsila wezimoto, le adblue Jerry Can Container yenziwa nge-polyethylene esezingeni eliphansi futhi njengephakethe elihlanganisiwe, iza nebhokisi, isitsha, ikepisi elimhlophe le-polypropylene.
Iziqukathi namabhokisi nakho kuyathengiswa ngokwehlukana.
I-adblue yethu kaJerry Can Containers ihlangabezana nezidingo ze-FDA nazo zonke izinto zokusetshenziswa ezenza kube yindlela enhle yokugcina amanzi namanye amathuba amaningi.
I-Collapsible 5 litre gel gel cubitainer
I-Collapsible 5 litre ultrasound gel cubitainer yenziwa nge-polyethylene esezingeni eliphansi futhi njengephakethe elihlanganisiwe, iza nebhokisi, isitsha, ikepisi elimhlophe le-polypropylene.
Amalitha ethu we-5 litre ultrasound gel cubitainers ahlangabezana nezidingo ze-FDA nazo zonke izinto zokusetshenziswa ezenza kube yindlela enhle yokugcina amanzi namanye amathuba amaningi.
Le mishini isetshenziselwa ukugcwaliswa nokufakwa kwesikhwama ebhokisini.
Umpompi ungumpompi wepulasitiki we-polyethylene futhi unesibambo sokuvula / ukuvala isigamu ukulawula okuphelele nokunemba kokugeleza. Ingasetshenziselwa ukukhipha uketshezi oluningi olungabasi kusuka ezitsheni zethu.
GImininingwane eneral and Incazelo
Amandla we-10l 20l Semi-Collapsible Jerry Can enziwe ngebanga lokudla ldpe.
Yisitsha sokusetshenziswa kwasendlini jikelele sokuphatha nokugcina amanzi okuphuza.